सनराइजको नाफा १ अर्ब ७० करोड, अघिल्लो आवभन्दा १५.५७ प्रतिशत वृद्धि
साउन २९, काठमाडौं (अस) । सनराइज बैंक लिमिटेडले आव २०७५/०७६को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले गत आवमा रू. १ अर्ब ७० करोड नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आवको तुलानमा १५ दशमलव ५७ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आवमा बैंकको नाफा रू. १ अर्ब ४७ करोड थियो ।
बैंकको खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो आवको तुलनामा २५ प्रतिशत बढेर रू. ३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ भने सञ्चालन मुनाफा २७ प्रतिशत बढेर रू. २ अर्ब ६० करोड पुगेको छ । बैंकको गत आवमा वितरण योग्य नाफा रू. १ अर्ब ११ करोड छ ।
बैंकको चुक्तापूँजी गत आवमा रू. १८ अर्ब १५ करोड पुगेको छ । बैंकको जगेडा कोषमा रू. २ अर्ब ५८ करोड छ । बैंकले रू. ७५ अर्ब ४३ करोड निक्षेप संकलन गरेको छ । गत आवमा रू. ६८ अर्ब ८७ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकको निष्क्रिय कर्जा १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत छ । बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी रू. २० दशमलव ९४ छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १५१ दशमलव ४७ रहेको छ ।